प्रधानमन्त्री ओलीमाथि ‘सुरक्षा थ्रेट’ बढ्याे, कहाँबाट ? - Everest Dainik - News from Nepal
याे पनि पढ्नुस नेकपा र सीपीसीबीच भाइचारा सम्बन्ध स्थापित गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर
याे पनि पढ्नुस स्थायी कमिटी बैठकमा किन बस्दैनन् ओली ?
सम्भावित चुनौती विश्लेषण गरी सुरक्षाकर्मीलाई उच्च सतर्क रहन निर्देशन दिइएको छ। प्रधानमन्त्री निवासमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई २४ सै घण्टा सतर्क रहन भनिएको छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।
ट्याग्स: केपी शर्मा ओली, गृह मन्त्रालय